ယနေ့ကမ္ဘာကြီးက တရုတ်-အမေရိကန် ပူးပေါင်းမှုအားလိုအပ်ကြောင်း ပညာရှင်များပြောကြား - Xinhua News Agency
ယနေ့ကမ္ဘာကြီးက တရုတ်-အမေရိကန် ပူးပေါင်းမှုအားလိုအပ်ကြောင်း ပညာရှင်များပြောကြား
နယူးယောက်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၀ ရက် (ဆင်ဟွာ)
အမေရိကန်နိုင်ငံ အစိုးရအနေဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ဦးစားပေးရန် တိုက်တွန်းလျက် တရုတ်အား ရန်သူနှင့် မိတ်ဖက်အဖြစ် တစ်ချိန်တည်းတွင် ပြုမူဆက်ဆံရန်မှာ အမေရိကန်အတွက် “ဖြစ်ချင်နေတဲ့အရာသာ” ဖြစ်ကြောင်း မကြာသေးမီက The New York Times ၌ဖော်ပြခဲ့သော ဆောင်းပါးတွင် အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး မူဝါဒရေးရာ ကျွမ်းကျင်သူ တစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။ဘိုင်ဒန် အစိုးရ၏မူဝါဒနှင့် တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအား အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြလျက် အမေရိကန်နိုင်ငံအနေဖြင့် အင်အားကြီးသည့် အနေအထားမှ ယှဉ်ပြိုင်နေသလို ဘုံစိန်ခေါ်မှုများကို ဖြေရှင်းရန် တရုတ်နှင့် လက်တွဲလုပ်ကိုင်လိုကြောင်း နယူးယောက်စီးတီး တက္ကသိုလ်မှ သတင်းစာပညာနှင့် နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ပါမောက္ခ Peter Beinart က ပြောကြားခဲ့သည်။
သို့သော်လည်း “ဒါဟာ ဖြစ်ချင်နေတဲ့အရာသာဖြစ်ပြီး ပန်းတိုင်နှစ်ခုနဲ့ ဆန့်ကျင်နေတယ် ” ဟု ၎င်းက ဆက်လက် ပြောကြားပြီး “အမေရိကန် ပြည်သူတွေကို အန္တရာယ် အပေးနိုင်ဆုံးအရာတွေကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်ဖို့က ပိုနက်ရှိုင်းတဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုတည်းသာ ဖြစ်ပါတယ်” ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
ပါမောက္ခနှင့် စာရေးသူ၏အမြင်အရ အမေရိကန်-တရုတ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု၊ အစိမ်းရောင်နည်းပညာများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် COVID-19 ကပ်ရောဂါကဲ့သို့သော အရေးကြီးသောပြဿနာများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရာတွင် အထောက်အကူပြုနိုင်ကြောင်း ရေးသားဖော်ပြထားသည်။
“ယနေ့ကမ္ဘာ၏ အဆင်မပြေလှသော အမှန်တရားများက အမေရိကန်နှင့် တရုတ်ကြား ပိုမိုကြီးမားသော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု လိုအပ်နေပါတယ်” ဟု ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
ကံမကောင်းစွာဖြင့်၊ ထိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည် အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ကြီးထွားလာသော ပဋိပက္ခများနှင့် သဟဇာတမဖြစ်ကြောင်း၊ “တရုတ်ကို ရန်သူအဖြစ် ပြုမူဆက်ဆံလိုသော လင်းယုန်များနှင့် ရာသီဥတုနှင့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကပ်ဆိုးများကို ကာကွယ်ရန် လက်တွေ့ကျသော ဆောင်ရွက်မှုအတွက် မခွဲခြားဘဲ တိုးတက်မှုများ” အကြား ရွေးချယ်မှုပြုရန် Beinart က မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ (Xinhua)
NEW YORK, Nov. 19 (Xinhua) — It is “wishful thinking” for Washington to treat China as an adversary andapartner at the same time, an expert on American foreign policy said inarecent op-ed piece in The New York Times, calling on the U.S. government to prioritize cooperation with Beijing.
Summarizing the Biden administration’s policy and engagement with China, Peter Beinart, professor of journalism and political science at the City University of New York, said the United States wants to “work with China to address common challenges while competing fromaposition of strength.”
However, “that’s wishful thinking; the two goals collide,” he said, adding that “it is only through far deeper cooperation that the United States can address what menaces Americans most.”
In the opinion of the professor and commentator, U.S.-China cooperation can help tackle crucial issues such as climate change, green technologies development and the COVID-19 pandemic.
“The inconvenient truths of today’s world require far greater cooperation between Washington and Beijing,” he said.
Unfortunately, such cooperation isn’t compatible with growing antagonism in the United States, Beinart noted, urging Washington to makeachoice between “the hawks who want to treat China as an enemy and progressives desperate for dramatic action to prevent climate and public health catastrophes.” Enditem
တရုတ်နှင့် ရုရှား စစ်တပ်များ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ပူးတွဲလေကြောင်းကင်းလှည့်မှု ပြုလုပ်ခဲ့